Mastercard Kufambira Mberi Kuita kweApple Pay | IPhone nhau
Mastercard yakatsunga kusimudzira dhijitari kubhadhara uye ndosaka yakazivisa chiyero icho muUnited States neCanada chakakosha chaizvo: haichazodi siginecha yemutengi paanenge achibhadhara uchishandisa kiredhiti kadhi uye kadhi rekubhengi. Kunyangwe izvi zvingaite senge zvisina musoro munyika dzakaita seSpain, uko siginecha yerisiti inenge isisipo, munyika mbiri idzi ichiri kushanda.
Uye kune zvinhu zvinotengwa mairi kunyange kuita kubhadhara kuburikidza neApple Pay, pamwe nekuzikanwa kwekupedzisira kwemutengi kuburikidza neminwe yavo yeminwe, ivo vanofanirwa kubva vazvizivisa pachavo vachishandisa siginicha yavo, uye mutengesi anotarisa kuti siginecha inoenderana neiyo iri pakadhi rechikwereti yakashandiswa. Munguva pfupi iyoyo ichave nhoroondo.
Chinangwa chemutengi kusaina risiti hachisi chimwe kunze kwekutarisa, nemutengesi, kuti siginecha ichienderana neiyo kiredhiti kadhi. Kana ichi chaive chinhu chakajairika muSpain, pane chero munhu anorangarira kuti mutengesi akambotarisa siginecha? Nematanho azvino ekuzivisa masisitimu, akanyanya kupararira fingapirindi yemafoni, hazviite chero pfungwa kuti siginicha ichiri kushandiswa. MuUnited States maive nemamiriro ezvinhu akawandisa zvekuti kunyangwe vachizvizivisa neminwe yezvimwe zvekutenga (zvinodarika madhora makumi mashanu) zvinoda siginecha yemutengi.
MuSpain ruzivo neApple Pay rwakasiyana zvakanyanya. Mushure mekunge rinenge gore ndichishandisa Apple Pay neangu iPhone neApple Watch, ruzhinji rwevatengesi vane dhata risingabatanidzi vanobvumidza kushandiswa kweApple Pay, kunyangwe kana vasingazvitaure. Chete pane dzimwe nguva apo ini ndakakumbirwa kuisa iyo PIN pane iyo dhatafone, uye ini ndinongorangarira akati wandei nguva mangwanani-ngwanani zvakanyanya apo ndaifanira kusaina risiti. Kuisirwa CaixaBank muApple Pay uye zvipikirwa zvezvimwe zvinhu zvakaita seN26 gore risati rapera, pamwe nekuvapo kweSantander neCarrefour PASSichabatsira kuwedzera kweApple Pay muSpain kusvika kune ruzhinji ruzhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Mastercard Mberi Implementation yeApple Pay
Apple kubhadhara mutemo akadaro
Zvinoonekwa kuti hauna kuenda kuimba yemitambo, kwete chete kuti unofanirwa kusaina risiti kana usinga bvunze ID yako. Uye vasingataure? Hahaha, ingangoita utopia, isingasviki 1% yemabhaisikopo unayo uye uchiri kufanira kusaina risiti uye kuratidza ID yako
Pindura Apple kubhadhara mutemo